China Palmitoyl Tripeptide-5 factory na-emepụta | JYMed
Product aha: Palmitoyl Tripeptide-5
Molekụla Formula: C37H67F6N5O9
Molekụla arọ: 839,959 g / mol
Ngwa: Ezigbo akpụkpọ, mgbochi ịka nká
Palmitoyl Tripeptide-5 mee nke n'agbụ nke amino asịd, na nwere ike banye n'ime epidermis na-abanye na miri n'ime dermis, ebe ọ akpali collagen mmepụta na ike anụ ahụ uto. Ọ bụghị nanị na gbapụrụ ọsọ elu collagen njikọ na anụ ahụ, kama n'oge ọmụmụ-atụ aro na a peptide nwekwara nwere ike ikwurịta okwu akpụkpọ sel gbochie nsị na banye n'ime ha ime ihe ọjọ. The mgwa eme nke a site mimicking na ahu si eke nkwurịta okwu usoro na-agwa mkpụrụ ndụ ihe na-eme. Nke a na ụdị nkwurịta okwu na-enyere akpụkpọ mkpụrụ ndụ ma iwepụ si nsị ma ọ sụgharịa ya inert. Palmitoyl Tripeptide-5 si eke ikwu bụ na nke a doo anya na mmiri mmiri nke na-enweghị isi na bụ mmiri soluble. Nke a peptide nwere ike dị na a ọnụ ọgụgụ nke nlekọta anụ ngwaahịa, ma ọ na-eji ọtụtụ n'ime mgbochi ịka nká creams na ihu serums. Palmitoyl Tripeptide-5 na-eji na a ọnụ ọgụgụ nke dị iche iche mgbochi ịka nká ngwaahịa n'ihi na nke ike na-ekwurịta okwu na akpụkpọ sel na ibe collagen mmepụta. Young-na-achọ, ike anụ bụ ekwe omume na-enweghị collagen, na ndị okenye gị anụ na-akawanye, ndị na-erughị collagen ọ na-arụpụta. Ụlọ ọrụ ndị na-emepụta mgbochi ịka nká serums na creams na-eji Palmitoyl Tripeptide-5 ọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-agwa akpụkpọ sel mbo mbuli collagen mmepụta ndammana, nke a na-eme ka ọ na ukwuu irè, ka ndị ọzọ na ngwaahịa na-ebu collagen pụrụ ịbụ na oké kwesịrị ekwesị na-banye n'ime akpụkpọ . N'ihi Palmitoyl Tripeptide-5 na-arụ ọrụ si ntughari ntọt collagen mmepụta, ị pụrụ ịhụ mma na ya pụta ngwa ngwa karịa ị ga-ọ bụrụ na ị na-eji a ude ma ọ bụ ọbara na e dere collagen si anụ anụ ahụ. Mgbe ọmụmụ banyere Palmitoyl Tripeptide-5 ka ha n'oge nkebi, e nwere ole na ole akụkọ nke ọ bụla dị oké njọ mmetụta banyere nke a peptide. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nwere mmetụta ọsọ ọsọ anụ, i nwere ike na-eme ka ihe mgbochi-ịka nká ngwaahịa nwere nke a peptide. Ihe ụfọdụ na-nfụkasị Jeremaya bụ reddening nke anụ,-agba na saịtị nke ngwa, na ihe ọkụ ọkụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe ihe ọ bụla nke ndị a okwu na-eji ihe mgbochi-merela agadi ngwaahịa na e dere Palmitoyl Tripeptide-5, ị kwesịrị ịkpọ gị dematọlọjist ozugbo iji chọpụta ma ma ọ bụ peptide na-eme ka mmeghachi omume ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọzọ ngwaahịa n'ozuzu pụrụ ịbụ a mma maka ị. "Ezi Obi, Innovation, Rigorousness, na arụmọrụ" bụ persistent ncheputa nke ike anyị maka ogologo oge ike jikotara aka wee na-eji ọkụ maka ibe reciprocity na nkwanyerịta ụgwọ ọrụ maka N'ogbe Price ịchọ mma Raw Ihe Skin ịrụzi Palmitoyl Tripeptide-5 / Syn-coll / Pal-kvk ntụ ntụ, Your support bụ anyị ike ebighị ebi! Obi ụtọ na-welcome ahịa n'ụlọ na mba ọzọ ileta anyị ụlọ ọrụ. "Ezi Obi, Innovation, Rigorousness, na arụmọrụ" bụ persistent ncheputa nke ike anyị maka ogologo oge ike jikotara aka wee na-eji ọkụ maka ibe reciprocity na nkwanyerịta ụgwọ ọrụ maka Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tripeptide-5 ntụ ntụ, Syn-coll, Ị nwere ike mgbe niile chọta ngwaahịa na ngwọta mkpa ka i nwere na anyị ụlọ ọrụ! Mmadụ Bịa na ịjụ anyị banyere anyị ngwaahịa na ihe ọ bụla anyị maara na anyị nwere ike inye aka na akpaaka akụkụ ahụ mapụtara. Anyị na-atụ anya na-arụ ọrụ gị maka a mmeri-mmeri ọnọdụ.